Diyaaradda EasyJet: Hadda waxay u duuleysaa Jordan, Masar iyo Morocco iyadoo ka timid saldhigyada Talyaaniga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda EasyJet: Hadda waxay u duuleysaa Jordan, Masar iyo Morocco iyadoo ka timid saldhigyada Talyaaniga
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Masar • Italy War Deg Deg Ah • Jordan War Degdeg ah • Moroko News • News • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Diyaaradda EasyJet ayaa bilaabaysa 9 khad oo cusub oo isku xiraya Talyaaniga ilaa Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe iyada oo ka duulaysa saldhigyadeeda Milan Malpensa, Venice, iyo Naples.
Markii ugu horeysay ee laga bilaabo dayrta soo socota, shirkadu waxay ku xidhi doontaa Talyaaniga iyo Jordan duulimaad toos ah oo u dhexeeya Milan Malpensa iyo Venice ilaa Aqaba-Petra, mid ka mid ah todobada mucjiso ee aduunka.
Xidhiidhku wuxuu shaqayn doonaa laga bilaabo Oktoobar 27, iyadoo 2 wiiggii toddobaadlaha ah Arbacada iyo Axadda laga bilaabo Milan, halka Venice, laba jeer toddobaadkii Talaadada iyo Sabtida, laga bilaabo Oktoobar 29.
Isku xirka Masar ee Milan Malpensa iyo Venice waa la wanaajin doonaa, iyadoo la soo bandhigayo Marsa Alam ee labada saldhig, duulimaadka cusub ee Hurghada ee Venice iyo xaqiijinta xiriirka jiilaalka ee Malpensa.
Waxaa jira warar ku saabsan Morocco oo leh duulimaadka cusub ee Agadir oo ka yimid Milan Malpensa iyo soo bandhigida Marrakech ee Venice.
Xiriirka ka dhexeeya waqooyi bari ee Talyaaniga iyo Boqortooyada Ingiriiska ayaa sidoo kale sii kordhaya duulimaadka cusub ee u dhexeeya Verona iyo Manchester.
Maalgashiyo cusub ayaa sidoo kale imaanaya koonfurta iyada oo la xiriirta isku xirka cusub ee u dhexeeya Naples Capodichino iyo Hurghada, taas oo kordhinaysa bixinta meelaha firaaqada ah ee ka imanaya magaalada caasimadda ah ee Campania.
Xidhiidhku waxa uu shaqayn doonaa laga bilaabo Oktoobar 29 iyada oo la adeegsanayo soo noqnoqoshada laba jeer toddobaadkii, Talaado iyo Sabti.